Uncategorized – siifsiin
Sirna Fudha fi Herumaa!
Mee nannoo isiin jiraatanitti, sirni gaa’illi ittin rawwatamuu maal fakkataa? Akkuma saba bal’aa qabnuu aadaan fudhafi heeruma Oromiyaa keessatti karaa adda addan akka raawwatamuu beekamaa dha. Mee har’a sirna gaa’ila nannoo tokkotti argee isiif qooda. Sirnichii kan jalqabu guyyaa gurbaan warra intalaatti jarsoolee sadii hanga torbaa ta’an ergachuun jalqaba. Garuu guyyaa jalqabaa jarsolee deeman gara … Continue reading Sirna Fudha fi Herumaa!
Qotee bultootni tooftaa gabaa argachuu baran
Jireenya Qotee bula Tura Tashitee “Ani abba ijoollee 8 ti; shamarran sadii fi dhiira 5. Haadha manaa waliin nama 10. Yeroo sirna Dargii keesssa gara barumsa mootummaatiin diqqoo/xinnoo baradheera. Haati mana kiyyas barattee jirti.” Waan armaan olii kan nuuf ibse Turaa Tashitee jedhama. Qoteebulaa dhalaata Godina Arsi Lixaa, Aanaa Kofalee, Ganda Gormichoo ti. Waa’ee fooyya’uu jiruu … Continue reading Qotee bultootni tooftaa gabaa argachuu baran
Barataa tokkotu yeroo hunda barsiifatee mana baruumsa deema. Yeroo hunda sababa adda adda dhiyeesin beekama. Guyya tokko yeroo inn mana baruumsa ga’uu barsiisan daree seene barsiisa ture. Innis dhufee balbala rurukutee . Barsisaniis, “har’a immoo maal taate sitti barfatee?”jedheen. Yaa barsiisa koo ani kubba milla baay’een jalladha. Gara ganamaa keessa abjuu koo keessa kubba milla … Continue reading Bacoo